अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटल भवनको खाडल: उपचार हो कि पासो (फोटो फिचर) - समय-समाचार
समय-समाचार शुक्रबार, २०७७ मंसीर ५ गते, ०६:२७ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । माइतीघर मण्डलामा अवस्थित अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलको तला चढ्नु अघि मुखैमा झन्डै १० फिट गहिरो खाडल खनिएको छ।
कुनै कामका लागि त्यो खाडल खनिएको होला, त्यसमा कुनै प्रश्न भएन। तर जसरि अब्यबस्थित र गैर जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले त्यो खाडल खनिएको छ, त्यो हेर्दा, बिरामी उपचार गर्ने ठाउँ नभएर, त्यहाँ आएका बिरामीलाई त्यहि खाल्डोमा पार्ने जस्तो देखिन्छ।
त्यहाँ न कुनै छेकबार छ, न प्रशस्त ठाउँ नै छ बिरामीलाई ओहोर दोहोर गर्न। समयसमाचारको टिमले हेर्दा हेर्दै गर्दा, एक बिरामी झन्डै चिप्लिएर त्यहि खाल्डोमा कसो परेनन्। एउटा पासो जस्तो लाग्छ त्यो खाल्डो।
भोलि त्यहि खाल्डोमा परेर त्यहीँ उपचार गराउन आएका बिरामी मद्धे कसैको मृत्यु भयो भने को हुन्छ जवाफदेही ? प्रशासनको आँखा किन त्यहाँ पुगेन ?
बिरामीले उपचारमा खर्च गर्ने पैसा प्रति प्रशासनको ध्यान पुग्ने, एक रुपियाँ कमि भयो भने पनि उपचार नहुने तर हस्पिटल जस्तो ठाउँमा त्यत्रो भ्वाङ्ग पर्दा पनि प्रशासनको आँखा नपुग्ने, कस्तो बिडम्बना !
हेर्नुहोस केहि तस्बिरहरु।
वाउ, सिन्ती झरना ! (फोटो फिचर)
अभिभावक विहिन बालबालिका
तालमा फुलेको कमल
प्रम देउवाबाट बाघको तस्बिर अवलोकन
वर्षाले क्षति पुगेको पुल
सन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय